Fayraska Korona - informasjon på somali – Oslo og Viken
Publisert Wed Mar 25 14:39:14 CET 2020 Oppdatert Wed Mar 25 16:07:51 CET 2020
16 kii maarso ayay soo baxeen talooyinka cusub ee loogu talagalay dadka hargabka qaba. Qofkasta oo qaba astaamaha cudurka caabuqa neef-mareenka waa inuu guriga joogaa , Maxadka Caafimaadka Dadweynaha ayaa sidaa ku qoray talooyinka cusub. Sidoo kale, kuwa leh astaamaha khafiifka ah sida hergabka ama cunna xanuunka waa inay joogaan guriga hal maalin ka dib marka ay calaamadaha iska waayaan.
15-kii Maarso , dowladdu waxay soo saartay sharciyo cusub oo dadka ka mamnuucaya inay tagaan aqal firaaqeed ku yaal degmo aan ahayn halka ay ku nool yihiin. Taas macnaheedu waa in dadka lagu khasbi karo in ay tagaan guryahooda iyadoo lala tiigsan doono sharciga haddii loo baahdo.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira xeerar badan oo maxalliga ah iyo xannibaadaha safarka.
Si loo joojiyo fiditaanka Covid-19, isla mar ahaan taana la joogteeyo adeeegyada daruuriga ah iyo daryeelka caafimaadka, ayaab Agaasinka Caafimaadku wuxuu go’aansaday dhowr tillaabo oo dhaqan gali doona laga bilaabo Khamiista 12-ka Maarso. Saacada 1800.
Waxaa la xirayaa xarumahan soo socda :
Jaamacadaha iyo kuliyadaha
Goobaha waxbarasho ee kale.
Intaa waxaa dheer, dhowr dhacdooyin iyo ganacsiyo ayaa la xiray:
Dhacdooyinka isboorti iyo nashaadaadyo isboorti oo abaabulan labadaba gudaha iyo dibeddaba
Dhamaan xarumaha cuntoyinka iyo cabitaanka, marka laga reebo hudheelada iyo maqaaxiyaha wax laga cuno, ee fududeyn kara booqdayaasha in ay masaafada ugu yaraan 1 mitir isu jiraan. Cuntada waa inaan dadku guran. Goobahaas waxaa ka mid ah makhaayad, baarar, iyo baararka habeenkii.
Goobaha lagu jimcsado
Rayislayaasha, daryeelka maqaarka, duugista iyo daryeelka jirka, , tatuuga, dalooliyaasha iyo iwl.
Barkadaha dabaasha, barkadaha biyaha iyo iwl.
Xirfadlayaasha daryeelka caafimaad ee ka shaqeeya daryeelka bukaanka waa ka mamnuuc inay u safraan dibada. Mamnuucaan wuxuu khuseeyaa safarka ganacsiga iyo safarka shaqsiga labadaba. Go'aanku wuxuu hirgelayaa laga bilaabo 12 Maarso ilaa iyo Abril 2020.
Gaadiidka dadweynaha ayaa shaqayn doona. Sababta oo ah in dadka ka shaqeeya howlaha bulshada ee muhiimka ahi ay qaadaan karaana si ay shaqada u tagaan iyagoo midba midka kale aanu ag fariisan.
Agaasinka caafimaadku wuxuu ka codsanayaa dadku in aanay booqan xarumaha dadka nuguli degan yihiin (waayeelka, dhimirka, xabsiyada iwm).
Codsiyada socdaalka ee soo socda ayaa la codsaday:
Ujeeddada ayaa ah in shaqeeyaan gaadiidka gudaha sida ugu macquulsan
Agaasinka Caafimaadka ayaa si weyn u dhiirigelinaya in laga fogaado safarka firaaqada
Ha aadin shaqada ama iskuulka, iska ilaali safar aan daruuri ahayn (gudaha iyo dibeddaba), iska ilaali gaadiidka dadweynaha haddii aad awoodo, ka fogow meelaha kale ee aad si fudud ugu dhowaan karto dadka kale, iskana ilaali inaad xiriir dhow la yeelato dadka kale.
Qof kasta oo ka yimaadaa safarrada ka baxsan Sweden iyo Finland waa inuu karantiil galaa, ayadoon loo eegayn inay leeyihiin astaamo ama lahayn. Dib looga bilaabo 27 Febraayo.
Laga bilaabo Talaadada, safarka u imaanshaha iyo ka imaanshaha Finland iyo Sweden waxaa sidoo kale saameyn ku yeelan doona qawaaniinta karantiilka.
Guddiga wax ka qabashada xaaladaha deg degga ah waxay tixgelinayaan in 15-ka howlaha soo socdaa ay muhiim u yihiin bulshada:
Maareynta iyo maaraynta dhibaatooyinka
Amniga kombuyuutarada waaxda rayidka
Dabeecada iyo deegaanka
Biyo iyo bullaacadaha
Adeegyada isgaarsiinta elektaroniga
Adeegyada ku saleysan dayax gacmeed
Ka aqri faahfaahin dheeraad ah bogga shabakadda Agaasinka Caafimaadka
Kuwani waa astaamaha
Maalmaha ugu horreeya waxay la kulmaan qandho badan. Waxay sababi kartaa murqo xanuun, daal, qabow iyo dawakhaad. Cudurka guud iyo shuban biyoodka. Inta badan waxay muujiyaan calaamadaha soo kabashada lix ilaa toddobo maalmood kadib.
Marxaladaha hore ee cudurka, calaamadaha caadiga ah waxay noqon doonaan madaxa, qufac qalalan iyo san duuf leh. Ugu dambayntii, haddii fayruusku ka sii daro, qofku wuxuu la kulmi karaa qufac xabka iyo quff dhiig wata.
Wejiga xiga ee cudurka waa neefsashada culus iyo / ama feedho xanuun. Sambabbada oo yaraada ama neefsashada oo yaraata oo u baahan keenis oksijiin ayaa ku dhici kara xaaladaha ugu xun. Astaamuhu badanaa waxay dhacaan qiyaastii maalinta shanaad ee jirrada.
Xaaladaha qaarkood, koronafayarasku wuxuu u horseedaa kelyaha oo diciifa. Calaamadaha tan waxaa ka mid ah booqashooyinka musqusha oo soo noqnoqda, bararka lugaha iyo indhaha hoostooda, dhiig karka ama daal iyo daciifnimo.
Miyaad qabtaa wax su'aalo ah oo ku saabsan maamulada caafimaadka?
Khadadka macluumaadka ee ku saabsan fayraska koronaha waxaa laga heli karaa lambarka taleefanka: 815 55 015.
Dadka u maleeya inay qabaan cudurka waxaa laga codsanayaa inay wacaan dhakhtarkooda ama qolka xaaladaha degdegga ah 116 117.
Waa muhiim in dadka u maleeya inay cudurka qabaan aysan u imaanin dhaqtarka ama qolka gargaarka degdegga ah, laakiin ay guriga joogaan oo ay taleefan kula soo xiriiraan.
Macluumaadka cusboonaysiinta ee Maxadka Caafimaadka Dadweynaha waxaa laga heli karaa halkan.
Tan waa in aad ogaataa
Kiiski ugu horreeyay ee fayraska ee laga helay Noorway waxaa la xaqiijiyey 26-kii Febraayo.
Maamulka Noorway waxay soo keensadeen qalab si dhakhso leh loogu ogaado cudurka, waxayna soo saareen tilmaamo loo diray daryeelka caafimaadka ee dalka oo dhan. Dhamaan garoomada diyaaradaha ee Norwey iyo la taliyayaasha dowladda hoose waxay sidoo kale heleen waraaqo ay ku qoran yihiin tilmaamo.
Dhamaan bangiyada dhiiga ee dalka waxay ku soo rogeen karantiil 4-todobaad dhiig-bixiyeyaasha kuwaasoo u safray meelaha uu ku faafay cudurka koronafayras-ka.
Bangiga dhiiga ee Oslo, waa mid shuruudo adag, halkaas oo qof kasta oo la soo xiriiray ee xiriir la leh qof joogay goob uu koronafayrasku ku faafay uu helayo karantiino.
Laga bilaabo 14 Maarso, 2020, Wasaaradda Arimaha Dibadda waxay kula talineysaa dadka noorwiijigu in aanay u safrin wadamada oo dhan hadii laga maarmikaro. Sababta oo ah faafitaanka koronafayraska aawadii.
Halkan ka fiiri talobixinta safarka ee UD.
Agaasinka Caafimaadka iyo Maxadka Caafimaadka Dadweynaha waxay weydiinayaan dhammaan shaqaalaha caafimaadka iyo adeegga daryeelka ee ku sugnaa meelaha uu ku faafay cudurka koronafayraska in ay shaqada ka joogaan muddo 14 maalmood ha marka ay wadanka dib ugu soo laabtaan.
Koronafayras SARS-CoV-2 (oo sidoo kale loo yaqaan Koronafayras ama 2019-ncov) waa qoys faayras ah oo la magac baxay, waayo way isku eeg yihiin marka lagu eego miikroskoobka. Way wareegsan yihiin oo leeyihiin qodaxyo u eeg taaj.
Koronafayras wuxuu sababi karaa infekshannada neef-mareenka. Qaarkood waa dilaa, qaarna waa ka khatar yaryihiin.
Fayrasku waa fayras loo yaqaan RNA. Tani waxay ka dhigan tahay in maadada hidda-wadaha ay ka kooban tahay RNA bedelkii DNA, iyo in fayrasku si dhakhso ah ugu faafo isla markaana isbeddellada ay si isdaba joog ah u dhacaan. 5-tii Maarso, waxaa la ogaaday in fayraska koronahu uu isu beddelay labo nooc . Nooca asalka ah ee fayraska, oo loo yaqaan 'Nooca-S', ayaa u muuqda inuu sababo cudur fudud. Nooca labaad, oo loo yaqaan "Nooca-L", waa mid dagaal badan isla markaana si dhakhso leh u faafa. Hadda waa nooca "S" ka sii kordhaya ee faafaya. Nooca L hada wuu sii yaraanaya ilaa dhamaadkii bishii Janaayo.
Baarayaasha ayaa ku hawlan tijaabinta talaalada suurtagalka ah, laakiin tani waqti ayey qaadan doontaa.
Siduu khatar u yahay fayrasku?
Way kala duwan tahay. Qaarkood waxay isku arkeen astaamaha khafiifka ah, halka qaarna si xun u bukoodeen una dhinteen.
Infekshanku wuxuu keeni karaa qandho, qufac iyo dhibaatooyin neefsashada. Xaaladaha daran, waxay noqotaa oof wareen, iyo sambabada iyo kelyaha oo diciifa ama shaqeyn waaya.
Antibiyootigyadu waxba kama taraan fayrasyada, sidoo kale dawada hargabka iyaduna waxba kama tarto. Bukaanka cudurka qaba ee la seexiyo isbitaalada ayaa helaya cabitaan iyo taageerid xubnaha jirka. Haddii kale, nidaamka difaaca jirku waa inuu qabtaa shaqada.
Tirada dhimashada cudurka ayaa ah mid hooseysa, sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Adduunka. Kuwo badan oo ka mid ah dadkaas dhintay ayaa ahaa waayeel ama dad caafimaad xumo haysay.
Sidee lagu kala qaadi karaa fayraska?
Fayrasku waxa lagu kala qaadaa dhibicyo dadka dhexdooda, inta badan qufaca iyo hindhisada. Wuxuu kaloo ku fariisan karaa sagxadaha sida gacanta albaabka iyo meelaha kale ee laqabsado.
Inta badan kiisaska cudurku waxay ka dhaceen Shiinaha ama dadka Shiinaha ka yimid.
Baarayaasha ayaa filaya in tirada dhabta ah ee cudurkaasi qabtaa ay aad uga badan tahay tan la diiwaan galiyay.
Cudurku wuxuu ku dhacaa sida hergabka iyo ifilada, saddex siyaabood:
Hawada iyadoo loo marayo bukaanka hindhisada ama qufacaya si fayruusku u neefsado ama u taabto xuubka indhaha, sanka ama afka dadka u dhow.
Xiriir toos ah marka bukaanku gacmihiisa ku haysto fayraska oo uu ku gudbiyo isagoo la xiriira dadka kale.
Xiriir aan toos ahayn markii fayraska lagu wareejiyay agabka ama alaabada loo maro hindhisada / qufaca ama bukaanka ama kuwa kale ee ku jira gacmahooda iyo kuwa kale taabashada shayga.
Maxaa la qabtay si loo joojiyo?
Noorway, mas'uuliyiinta caafimaadku waxay qorsheynayaan illaa 25 boqolkiiba dadka inuu ku dhaco infekshanku. Tallaabooyinka la tixgalinayo waa in la yareeyo isticmaalka gaadiidka dadweynaha, in dib loo furo shaqaalaha caafimaadka iyo in la xiro iskuullada iyo xanaanooyinka. Maxadka Caafimaadka Dadweynaha wuxuu ku wargalinayaa dadweynaha boggan.
Maamulka Shiinaha ayaa go’doomiyay dhammaan Wuhan iyo magaalooyinkii deriska la ah. Waxay khuseysaa tobanaan milyan oo dad ah isku dar.
Wuhan waxaa loo diray ku dhawaad ​​1,000 kooxo caafimaad oo ka kala yimid gobollada kale ee dalka. laba cusbitaal oo cusub ayaa loo dhisay xawaare rikoor ah.
Magaalooyin badan oo Shiinees ah ayaa soo rogay xayiraad dhanka safarka ah, dalal dhowr ahna waxay soo rogeen in la jeegareeyo kuwa safraya.
Dhowr diyaaradood ayaa joojiyey duullimaadyadoodii ay ku tegi lahaayeen Shiinaha.
Saynisyahano ka kala yimid wadamo dhowr ah ayaa ka shaqeynaya sidii tallaal loo sameyn lahaa, laakiin tani waxay qaadan doontaa waqti dheer.
Fayrasku xaguu ka yimid?
Fayraskan ayaa markii ugu horraysay laga helay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha.
Magaalada waxaa ku nool 11 milyan oo qof waxayna ku taal galbeedka Shanghai.
Kiisaska ugu horreeya ee looga shakisan yahay infekshanku waxaa la helay dhammaadkii Diseembar, iyo dhimashadii ugu horraysay oo la diiwaan geliyay 9-kii Janaayo. Kiisaska ugu horreeya ee cudurka koronaha ee ay dadku kala qaadeen Wuhan waxaa laga yaabaa inay dhacday bartamihii Disembar.
Sida fayrasyada sambabada Sars iyo Mers, faayraska waxaa loo maleynayaa inuu ku dhacay xayawaanka. Illaa iyo hadda lama hubo xayawaanka "dambiilaha", laakiin ilaha ay u badan tahay infekshanku inuu ka yimid waa abeesooyin, fiidmeer, xoorka ama jiir.
Inbadan oo ka mid ah dadka cudurka qaba waxay ka shaqeynayeen ama joogi jireen Suuqa Cunnada Badda ee Wuhan, halkaas oo lagu iibiyo xoolaha iyaga oo nool iyo iyaga oo la qawracay labadaba.